Vechidiki muZanu PF Voshandisa Dandemutande Vachitsvakira VaMnangagwa Rutsigiro
Mutungamiri weZanu-PF, VaEmmerson Mnangagwa
Vechidiki kubva kubato riri kutonga reZanu PF, vanoparura chirongwa chinonzi #EDHasMyVote2018 icho chakanangana nekutsvagira rutsigiro vachamirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika gore rinooya, VaEmmerson Mnangagwa.
Chirongwa ichi ndechekukurudzirawo vechidiki vasati vanyoresa kuvhota kuti vaite izvi nekukasika.
Tete vemusangano mubazi revechidiki muZanu PF, VaGodfrey Tsenengami, vaudza Studio7 kuti chirongwa ichi chichangobva mukuparurwa chichaitwa pamandandemutande akaita seWhatsApp, Twitter, Facebook nemamwe uye chakanangana nekuona kuti VaMnangagwa vawana rutsirgiro rwakasimba musarudzo dza2018.
Vatiwo kunyange hazvo vatsigiri vebato ravo vakawanda vakatonyoresa kuvhota, chirongwa ichi chakananganawo nevaye vasati vanyoresa kuvhota.
Vati bato ravo rine vatsigiri vakawanda chose uye havabvumirane nevechidiki vekune mapato anopikisa avo vanoti ndivo vakaita kuti vechidiki vakawanda vanyorese kuvhota munyika.
Vati bato ravo rine rutsigiro kumaruwa uye rave kupinda mumadhorobha umo magara musina vakawanda vanofarira kuvhota.
Vaendererara mberi vachiti nyaya yekuti mapato anopikisa ari kuita zvikwata zvikwata achiumba mibatanidzwa inotaridza pachena kuti anoziva simba reZanu PF pasarudzo.
Asi munyori mubazi revechidiki mubato reMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai mudunhu reHarare, VaDenford Ngadziore, vaudza Studio7 kuti havabvumirane naVaTsenengami uye zvirongwa zvavo zvekuti vanhu vanyorese kuvhota zvakaita sana Bereka Mwana neMhou neMhuru Yayo zvakatambirwa zvakanyanya nevechidiki nekuti vave kuda shanduko.
Zvichakadai, VaTsenengami vati havazi kuzobvumidza kuti vechdiki vaite nyaya dzemhirizhonga zvikurusei pasurudzo.
Vati veruzhinji vanofanira kuvapa mukana kwete kuvatonga nezvaiitwa nechikwata chevaimbotungamira vechidiki mubato iri, VaKudzi Chipanga, nevamwe vavo.
Vatiwo vechidiki muZanu PF vachakwidza chikumbiro kuvakuru vebato iri kuti vanoda kuti vapihwe zvikamu makumi matatu ezvigaro zvese zveparamende nemakanzuru.